Google ee SameSite Casriyaynta Cusbooneysiinta Maxay Daabacayaashu Ugu Baahan Yihiin Inay Kaga Gudbaan Cookies-ka Bartilmaameedka Dhageystayaasha | Martech Zone
Google ee SameSite Casriyaynta Cusboonaysiinta Maxay Daabacayaashu Ugu Baahan Yihiin Inay Kaga Gudbaan Kukiyada Beerta Bartilmaameedka Dhageystayaasha
Isniin, February 17, 2020 Isniin, February 17, 2020 Jeff Kupietzky
Booqashada Cusbooneysiinta Google ee SameSite ee Chrome 80 Talaadada, Febraayo 4 ayaa wali calaamadeynaysa ciddiyaha kale ee naxashka ku jira ee loogu talagalay cookies-ka dhinac saddexaad. Ka dib ciribta Firefox iyo Safari, kuwaas oo horeyba u joojiyay cookies-ka saddexaad, iyo digniinta cookie ee jira, SameSite casriyeynta ayaa sii xoojineysa isticmaalka cookies-ka saddexaad ee wax ku oolka ah ee loogu talagalay bartilmaameedka dhagaystayaasha.
Isbeddelku wuxuu si cad u saameyn doonaa iibiyeyaasha tiknoolajiyada xayeysiiska ah ee ku tiirsan cookies-ka saddexaad, laakiin daabacayaasha aan habeynin goobaha ay ku shaqeeyaan si ay ugu hoggaansamaan astaamaha cusub ayaa sidoo kale saameyn doona. Kaliya ma hor istaagi doonto lacag-sameynta adeegyada barnaamijyada ee qeybta saddexaad, laakiin ku guuldareysiga u hoggaansamida ayaa sidoo kale caqabad ku noqon doonta dadaallada lagu raadinayo dabeecadda adeegsadaha ee aadka u qiimaha badan ee loogu adeegayo waxyaabaha la xiriira, ee shakhsi ahaaneed.
Tani waxay si gaar ah run ugu tahay daabacayaasha leh bogag badan - isla shirkad isku mid ma aha isla goob. Taasi waxay ka dhigan tahay, iyada oo la cusbooneysiinayo cusbooneysiinta, cookies-ka loo isticmaalo guryaha kala duwan (iskutallaabta) waxaa loo tixgelin doonaa dhinac saddexaad, sidaas darteedna waa la xannibay iyada oo aan la helin goobaha saxda ah.
Beddel Hal-abuurka Wadayaasha
In kasta oo daabacayaashu ay si cad u baahan doonaan inay hubiyaan in boggaggooda lagu cusbooneysiiyay astaamaha saxda ah, isbeddelkan fudud ee Google waa inuu sidoo kale ka dhigayaa kuwa wax daabaca inay laba jeer ka fekeraan ku-tiirsanaantooda bartilmaameedka isticmaalaha buskudka. Sababta Laba sababood awgood:
Macaamiisha ayaa si aad ah uga walaacsan sida shirkadaha ay u isticmaalayaan xogtooda.
Waxaa jira hab aad uga saxsan oo lagu dhisi karo garaafka aqoonsiga.
Marka laga hadlayo asturnaanta xogta, daabacayaashu waxay la kulmaan seef laba af leh. Xog cusub ayaa muujineysa taas Macaamiisha ayaa si aad ah u doonaya waxyaabo shakhsi ahaaneed talooyinka lagu bixin karo oo keliya uruurinta iyo falanqaynta xogta hab dhaqankooda. Hase yeeshe, macaamiisha ayaa aad uga shakisan wadaagga xogtaas. Laakiin, sida ay daabacaadyaashu ogyihiin, labadoodaba ma wada lahaan karaan. Free nuxurka ayaa ku kacaya kharash, iyo gaaban paywall, habka kaliya ee macaamiisha ay ku bixin karaan waa xogtooda.
Waxay diyaar u yihiin inay sidaa sameeyaan 82% waxay doorbidayaan inay arkaan waxyaabaha kujira xayeysiiska halkii ay ka bixin lahaayeen rukunka. Taasi waxay ka dhigan tahay in hawshu ay saaran tahay daabacayaasha inay taxaddar badan muujiyaan oo ay tixgeliyaan sida ay u maareeyaan xogta isticmaalaha.
Beddelka Ka Fiican: Email
Laakiin, way soo baxday, waxaa jira qaab aad waxtar u leh, lagu kalsoonaan karo oo sax ah oo lagu dhisi karo garaafka aqoonsiga isticmaale marka loo eego ku tiirsanaanta cookies: cinwaanka emaylka. Halkii ay ka tagi lahaayeen cookies, taas oo siinaysa dadka isticmaala aragtida ah in lagu basaasayo, la socoshada isticmaaleyaasha diiwaangashan cinwaanka emaylkooda, iyo cinwaanka cinwaanka cinwaan gaar ah, aqoonsi la yaqaan ayaa ah hab aad loogu kalsoonaan karo oo lagu kalsoonaan karo ee ka qayb qaadashada dhagaystayaasha. Waa tan sababta:
Emailku wuu ka gaabsadaa - Isticmaalayaasha ayaa isdiiwaangaliyay si ay u helaan joornaalkaaga ama isgaarsiinta kale, iyagoo ku siinaya ogolaanshahooda inaad si toos ah ula xiriirto iyaga. Iyaga ayaa gacanta ku haya oo ka bixi kara wakhti kasta.
Emailku wuu ka saxsan yahay - Kukiyada waxay ku siin karaan oo keliya fikrad qallafsan oo ku saabsan shakhsiga isticmaaleha ee ku saleysan habdhaqanka — qiyaas ahaan da'da, goobta, raadinta iyo guji dhaqanka. Iyo, iyaguna si sahal ah ayey u dhooqo karaan haddii in kabadan hal qof adeegsado biraawsarka. Tusaale ahaan, haddii qoyska oo dhami wadaagaan laptop-ka, hooyada, aabbaha iyo dabeecadaha carruurta dhammaantood ayaa loo soo wada galay, taas oo ah aafo lala beegsanayo. Laakiin, cinwaanka emaylka wuxuu si toos ah ugu xiran yahay shaqsi gaar ah, wuxuuna ka shaqeeyaa qalabka oo dhan. Haddii aad isticmaasho wax ka badan hal qalab, ama aad hesho qalab cusub, emaylka ayaa wali u shaqeeya sidii aqoonsi joogto ah. Adkaysigaas iyo kartida isku xidhka gujinta iyo raadinta hab-dhaqanka astaamaha la yaqaan ee isticmaalaha ayaa u oggolaanaya daabacayaasha inay dhisaan taajirnimo, sawir aad uga saxan doorbidka iyo danaha isticmaalaha.
Emailku waa aamin yahay - Markuu isticmaale iska diiwaangeliyo cinwaanka emaylkiisa, waxay si buuxda u ogaadaan in lagu dari doono liiskaaga. Waa wax iska cad –waxay ogaal ahaan ku siiyeen ogolaansho, kana duwan cookies-ka oo dareemaya inaad moodid inaad si dhuumaaleysi ah ugu dhaqmayso dhaqankooda garabka. Iyo, daraasadaha waxay muujinayaan in isticmaaleyaashu ay 2/3 u badan tahay inay riixaan waxyaabaha ku jira - xitaa xayeysiiska - oo ka yimid daabacaad ay ku kalsoon yihiin. U guurista bartilmaameedka emaylka ku saleysan waxay ka caawin kartaa daabacayaasha inay sii wadaan kalsoonidaas, taas oo aad ugu qiimo badan wararka been abuurka ah ee maanta, jawiga shakiga weyn leh.
Email wuxuu albaabka u furaa kanaallo kale oo hal-ilaa-hal ah - Markaad sameysid xiriir adag adoo garanaya adeegsadaha isla markaana muujinaya inaad u soo gudbinayso waxyaabaha ku habboon ee shakhsiyadeed dantooda, way fududahay in lagu wareejiyo kanaal cusub, sida ogeysiisyada riixa. Marka isticmaaleyaashu ku kalsoonaadaan waxyaabahaaga, ogaanshahaaga iyo talooyinkaaga, waxay aad ugu habboon yihiin inay ballaariyaan xiriirkooda adiga, iyagoo siinaya fursado cusub oo ku lug lahaansho iyo lacag abuur.
In kasta oo la cusbooneysiinayo bogagga si loogu hoggaansamo isbeddelka SameSite waxay noqon kartaa xanuun hadda, oo laga yaabo inay si toos ah u jarto dakhliga daabacayaasha, runtu waxay yareyneysaa ku tiirsanaanta cookies-ka saddexaad waa wax fiican. Kaliya maahan inay noqdaan kuwo qiimo yar marka ay timaado la socoshada dookha shaqsiyadeed, laakiin macaamiisha ayaa sii kordheysa shaki.
U guuritaanka hada hab lagu kalsoonaan karo, qaab lagu kalsoon yahay sida emaylka si loo aqoonsado loona bartilmaameedsado dadka isticmaala waxay siineysaa xal mustaqbalka diyaar u ah kaasoo dhigaya daabacayaasha inay xakameeyaan xiriirka dhagaystayaashooda iyo taraafikada, halkii ay aad ugu tiirsan lahaayeen dhinacyada saddexaad.
Tags: waxaan chromiumdiiwaangelinta emaylkachrome googlesamesiteraadraaca
Jeff wuxuu u shaqeeyaa agaasimaha guud ee PowerInbox, oo ah shirkad tiknoolajiyad casri ah oo ka caawisa shirkadaha inay lacag ku helaan joornaalada emaylkooda iyagoo adeegsanaya waxyaabo firfircoon. Jeff ka hor inta uusan ku biirin PowerInbox, Jeff wuxuu u shaqeeyay Madaxweynaha iyo Maamulaha guud ee Oversee.net, isagoo maareyn jiray howlaha adduunka oo dhan isla markaana dhisi lahaa magacyada domain ee ay leedahay shirkadda Oversee ee ay maamusho mid ka mid ah kuwa ugu weyn adduunka, isagoo aasaasay shirkadda inuu yahay hogaamiyaha dhismaha guryaha ee Internetka. Isaga oo hogaaminaya, shirkadu waxay u kala duwanaatay jiilka hogaaminta, iyadoo dhiseysa dhowr kobcitaan sare iyo meherado heer sare ah. Intaas ka hor, Kupietzky wuxuu ka soo shaqeeyay jagooyinka hogaaminta ee X1 Technologies, Digital Insight (Intuit), Siebel Systems (Oracle), iyo Loudcloud / Opsware (Hewlett-Packard). Jeff wuxuu bilaabay shaqadiisa lataliye ee McKinsey & Co., isagoo horumarinaya xeelado ganacsi oo loogu talagalay softiweerka, caymiska iyo macaamiisha bangiyada. Hadal haynta badan ee shirarka Dijital ah ee Dijital ah, waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay CNN, CNBC, iyo joornaallo badan oo warar iyo joornaallo ganacsi ah.
Hagaha: Madal Suuq-geynta Noolaha ah ee Shirkadaada MarTech Stack